7 abahleli beekhowudi abadumileyo beLinux | Ubunlog
7 abahleli beekhowudi abadumileyo beLinux
Ngaba uyi-webmaster, umphuhlisi, umdwelisi nkqubo okanye uthathe nje ixesha lokufunda into entsha, Kweli candelo ndinelinye labahleli beekhowudi abadumileyo beLinux.
Enye yezona zinto zingaziwa kakhulu zavela xa ndiqala ukufuduka kwam ndisuka kwiWindows ndisiya kwiLinux yayisazi ukuba zeziphi ezinye iindlela endinazo zokuqhuba iinkqubo zam.
Yilapho ezininzi ze-newbies okanye abantu abangoyikiyo ukwenza utshintsho kuba besoyika ukuba abahleli beekhowudi zeLinux abazukusebenza.
Kulungile apha kulapho baphosakele kuba kwiLinux sinezixhobo ezininzi zenkquboUninzi lwezi zinto zinqamlezayo.
Abahleli beekhowudi babaluleke kakhulu xa kusenziwa nasiphi na isicelo Unokwenza umsebenzi ube lula ngokubonelela ngeetoni zezinto eziluncedo kubaphuhlisi ababonelela ngeempawu ezinje, iiplagi ukuze zisebenze ngakumbi, ukugcwalisa ngokuzenzekelayo okugcwalisa iithegi, iiklasi, kunye nee-snippets zekhowudi ngaphandle kokubhala.
Njengoko kutshiwo Baninzi abahleli kwaye apha kuphela senze ezinye zezona zisetyenzisiweyo.
1 Umbhalo ophezulu
3 I-GNU Emacs
Umbhalo ophezulu lelinye lawona maphetshana atyebileyo asetyenziswe ngabaprogram abaqeqeshiweyo. Ngaphandle kokuba nayo yonke imisebenzi esisiseko, i-Sublime inezinto ezininzi ezinamandla, ibonelela ngenkxaso kwiilwimi ezingenakubalwa zenkqubo, ukukhangela ikhowudi, ukubonisa, ukukhangela, ukubuyisela, phakathi kwezinye izinto ezininzi.
Nangona lo mhleli ehlawulwe, ungafumana ingxelo yolingo yasimahla ukwazi lo mhleli mkhulu.
Oku eumhleli wekhowudi uxhasa uninzi lweempawu eziphambilinjengokugqitywa kwethegi, ukufunyanwa ngokuzenzekelayo, ukukhangela kunye nokutshintsha, inkxaso yokudityaniswa kweenkqubo zangaphandle ezinje ngokwenza, ilint, i-weblint, njl.
Ukongeza ekulawuleni i-HTML kunye ne-CSS, ixhasa ezi lwimi zilandelayo.
I-GNU Emacs ngumhleli wekhowudi ocwangciswe kwi-LISP kunye no-C, Le yenye yezona zidumileyo kwiLinux, kwaye kungenxa yokuba yenye Ngeeprojekthi eziye zaphuhliswa nguRichard Stallman, umseki weprojekthi ye-GNU.
IsiGeany ijolise ekuboneleleni ngophuhliso olulula nolukhawulezayo. Inazo zonke izinto ezisisiseko njengokukhokela ngokuzenzekelayo, is syntax kunye nokuqaqanjiswa kwekhowudi okanye ii-snippets ezizenzekelayo, njl. IGeany icocekile kwaye ibonelela ngendawo enkulu yokusebenza.
IGedit Ingumhleli oza kuqala ukufakwa kunye nokusabalalisa kwethu Ubuntu, lo mhleli unokuba lula kakhulu kwaye umncinci, kodwa ungenziwa ngemfuneko ukulungelelanisa indawo yakho yokusebenza ngokufaka iiplagi kunye nokumisela useto esele lukhona.
IGedit inokuncediswa ngenxa yokongezwa kweeplagi esinokuyifumana kumnatha.
Izibiyeli zi umhleli oxhasa iiplagi ukwandisa ukusebenza kwazo kwaye ukufaka ezi plugins kulula ngokwenene. Kuphela kufuneka bacofe i-icon yesithathu kwibar esekunene kwaye iwindow iya kuvula ibonise ii-add-ons zabo ezidumileyo. Unokucofa nje ukufaka ukongeza naziphi na iiplagi kwaye unokukhangela naziphi na iiplagi ezithile.
Ukufaka lo mhleli, kufuneka siye kwiwebhusayithi yayo esemthethweni nakwakhe icandelo lokukhuphela sinokufumana ingxelo yokugqibela, kwityala okanye kwiphakheji yokwenziwa kwezinto
Iatom injalo umhleli ophuhliswe nguGithub, ke iza ngenkxaso epheleleyo kunye nokudityaniswa kweGithub. Ixhasa inani elikhulu leelwimi ngokungagqibekanga njenge-PHP, iJavacript, i-HTML, i-CSS, iSass, iNcinci, iPython, iC, iC ++, iCoffeescript, njl.
Kuza ne-Markdown syntax exhasa ukujonga kuqala bukhoma kwisikhangeli.
Ukufaka iAtom kwikhompyuter yethu kufuneka siye kwiwebhusayithi yayo esemthethweni kwi icandelo lokukhuphela siya kuyifumana iphakheji yedeb.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » 7 abahleli beekhowudi abadumileyo beLinux
UGP Muñoz Montoya sitsho
URudy cabrera pfari
Phendula GP Muñoz Montoya
Ikhowudi yeVenkile yeVidiyo ibilahlekile, sisihleli esipheleleyo kakhulu esineeplagi ezininzi!
Okokuqala ndiyabulela ngayo yonke iminikelo yakho.
kwaye okwesibini ndingongeza i-VIM.
Umhleli wam # 1 nguCodelobster - http://www.codelobster.com
Khuphela iividiyo zekhosi ze-Udemy kunye no-Udeler